အိုင်ယာလန်ကျွန်းမြောက်အတ္တလန္တိတ်အပေါ်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာစိန့်ဂျော့ခ်ျရဲ့ Channel ကို, အိုငျးရစျပင်လယ်ပြင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယား Channel ကိုအားဖြင့်၎င်း၏အရှေ့ဖို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ကျန်ထံမှ detach လုပ်လိုက်သောဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ယာလန်ကိုဗြိတိသျှကျွန်း, တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဥရောပမှာ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကျွန်းရှိပါတယ်, နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာနှစ်ဆယ်အကြီးဆုံးမြို့
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရေးအရကျွန်း 83% ကိုဖုံးသောအဆိုပါအိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံ (လည်းအိုင်ယာလန်ကိုခေါ်) အကြားကွဲကွာ, နှင့်ကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ဘက်၌, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သောမြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်, ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ယာလန်၏လူဦးရေကဂရိတ်ဗြိတိန်ပြီးနောက်ဥရောပရဲ့ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးကျွန်းအောင်, 6.5 သန်းမှာခန့်မှန်းထားသည်။ 4.7 အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသန်းဝန်းကျင်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 1.8 သန်းနေစဉ်။
ကော်ပိုရေးရှင်းထိန်းညှိပညတ္တိကျမ်း 2014 ၏အိုင်းရစ်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
• စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံများတစ်ခုမှာ: 2013 ခုနှစ်တွင် Forbes မဂ္ဂဇင်းမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေများအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အိုင်ယာလန်ရွေးချယ်ထားကြသည်။
• 1,000 ကမ်းလွန် Corporation ကျော်: ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်, အိုင်ယာလန် 1,000 ကျော်ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းမှအိမ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ယာလန်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုဘဏ္ဍာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆီသို့ဦးတည်ရွေသောကွောငျ့ကြောင်းပါပဲ။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့လိုအပ်ပါသည်။
• အနိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်း: အခြားအဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဥရောပနိုင်ငံတွေ, အိုင်ယာလန်သာ 12.5% ဖြစ်သောနိမ့်ဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းထားများတစ်ဦးရှိပါတယ်။
• R & D ကိုဆွဲဆောင်အားပေးမှုများ: သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နောက်ထပ်မက်လုံးပေးတဲ့ 25% အမ်းအခွန်အကြွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ်ကောင်းစွာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများများအတွက်တည်ရှိ။
• ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကင်းလွတ်ခွင့်: အိုငျးရစျဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဝင်ငွေအပေါ်အီးယူအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုခံစား။
• နှစ်ချက်အခွန်စာချုပ်များ: အိုင်ယာလန်အတူတူဝင်ငွေပေါ်နှစ်ဆအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတားဆီးအခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူများစွာသောအခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များသို့ဝငျခဲ့သညျ။
အိုင်းရစ်ကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်သို့မဟုတ်အခြားအိုင်းရစ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမည်ဆင်တူသည်မထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရိတ် name ကိုမှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်နာမကိုအမှီကြိုတင်ယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုင်ယာလန်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်ပုံတင်ရေးသာအီလက်ထရောနစ် format နဲ့လက်ခံသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်လအတွင်း၎င်း၏အမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ကြေးတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်အတွက် Office ကိုလိပ်စာနှင့်ဒေသခံအေးဂျင့်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များ်ထမ်းဆောင်ဖြစ်စဉ်ကိုလက်ခံရရှိရန်အိုင်းရစ်လိပ်စာရှိရမည်။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကလိပ်စာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
ရှယ်ယာရှင်များအိုင်းရစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်အ 149 ရှယ်ယာရှင်များမှတက်ရှိနိုင်ပါသည်။
Authorized Capital ကိုအိုင်ယာလန်ရဲ့အသစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Code ကိုရှယ်ယာမြို့တော်ပေးပုဂ္ဂလိကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများအတွက်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများကသာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးညီမျှသမျှအဘို့အတာဝန်ယူမှုကိုသယ်ဆောင်။
သို့သော်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ကော်ပိုရေးရှင်း၏လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါမျှော်လင့်ထားသည့်ရှယ်ယာမြို့တော် 25,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမပြုမီ, ဒီလိုအပ်သောရှယ်ယာမြို့တော်ငွေပမာဏအနည်းဆုံး 25% ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် အပ်နှံ.
အိုင်ယာလန်မှာတော့ပြည်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်း Non-ကုန်သွယ်အရောင်းအပေါ်မှာအပြား 12.5% ကုန်သွယ်အပေါ်အခွန် "အသက်ဝင်သော" ဝင်ငွေအဖြစ်လူသိများ (စီးပွားဖြစ်) အရောင်းအများနှင့် 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။ Non-ကုန်သွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာငှားရမ်းခြင်း, နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ, အကျိုးစီးပွားများနှင့်လေ့ "passive" ဝင်ငွေအဖြစ်လူသိများသည့်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံပါဝင်သည်။
ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအိုင်ယာလန်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့ဤမျှလောက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သော 12.5% ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းမှာအခွန်ကောက်နေကြသည်။ အခြား အခွန်ငွေစု ပါဝင်:
33% နှင့် 40% ၏မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်•;
1 မှ 9% ၏•တံဆိပ်ခေါင်းခွန်;
•တစ်တန် 15 ယူရိုတစ်ကာဗွန်အခွန်;
အိုင်ယာလန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်ပတ်လည်အခကြေးငွေအဆိုပါနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး£ 320 ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့မှတ်တမ်းအိုင်းရစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဟာ CRO မှာ register ရမယ်, နှင့်စီးပွားရေးအမည်များဤဖြစ်စဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏ privacy ကိုအိုင်းရစ်ဘုံဥပဒေနှင့်တရားရုံးစည်းမျဉ်းကိုအောက်ပါအတိုင်း။ အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကိုကော်ပိုရိတ်လျှို့ဝှက်ချက်များဝါကျ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ဘက်တော်သားဖြစ်စေခွဲခြားရန်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိ။ အိုင်ယာလန်ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်တူသဘောတရားများအပါအဝင်ကော်ပိုရိတ်လျှို့ဝှက်ချက်များ, အုပ်ချုပ်မည်သည့်ဥပဒေများကိုဝင်စားပါဘူး။ အများအပြားကော်ပိုရေးရှင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တလမ်းတည်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဆောင်းပါးများနှင့်အတူလျှို့ဝှက်သဘောတူညီမှုများသို့မဟုတ် Non-ထုတ်ဖော်ဝါကျပါဝင်သည်ရန်ဖြစ်ပါသည် အသင်း.
အိုင်ယာလန်မှာတော့စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များ, 2014 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေလိုအပ်သောစံချိန်စောင့်ရှောက်ဆိုထားသည်။ လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းစာရင်းကိုင်စာအုပ်တွေလိုအပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးတွင်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ပြင်ဆင်. ရမည်နှင့်ဤစာရွက်စာတမ်းများလည်းနှစ်စဉ် CRO နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ CRO မှနှစ်စဉ်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည့်ဘဏ္ဍာရေးစာရွက်စာတမ်းများအမြတ်နှင့်အရှုံးအကောင့်များပါဝင်သည်; ချိန်ခွင်စာရွက်; ဒါရိုက်တာရဲ့အစီရင်ခံစာ, နှင့်ပြဌာန်းစာရင်းစစ်၏အစီရင်ခံစာ။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းကိုလည်းနှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြန်လာ file လိုအပ်ပါသည် CRO.
အချိန်လိုအပ်ပါသည်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့အိုင်ယာလန်အတွက်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောအချိန်2ရက်3မှာခန့်မှန်းထားသည်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Corporation ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အိုင်ယာလန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါ မြန်မြန် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်, အနိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို, စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုကြီးစွာသောတိုင်းပြည်, ကြီးသောသုတေသန & ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမက်လုံးပေးအများအပြားကိုင်ဆောင်ကုမ္ပဏီအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်များစွာသောအခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များဒီတော့အတူတူဝင်ငွေမ: အိုင်ယာလန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား နှစ်ကြိမ်အခွန်ကောက်ရလိမ့်မည်။